I namanzi kakhulu, elikhanyayo, amnandi futhi enkulu berry kuyinto ikhabe. Lokhu izithelo okungavamile kungabonwa emashalofini izimakethe nezitolo kuphela ekuqaleni kwekwindla ehlobo sekwephuzile futhi. Sonke sibheke phambili kulokhu kulo lonke ngonyaka ukudla lokhu okumnandi futhi kuyazuzisa wokugaya ukudla kwethu amajikijolo. "Uzokwenzani eziwusizo ngakho?" - ubuza. Watermelon iqukethe eziningi izakhi: uvithamini C, PP, B1, B2, carotene, i-folic acid, i-cellulose, polysaccharides pectic, ukulandelela izakhi magnesium, i-potassium, insimbi, i-sodium, phosphorus, i -calcium nokuningi. Konke lokhu kuye kwaba nomphumela omuhle emzimbeni womuntu, ukuba ngqo - ku nezindlala endocrine, izitsha inhliziyo negazi, oyenza isebenze microflora emathunjini. Watermelon has ngemitselela imizimba yethu iphilile isisu futhi kutuswa ukusebenzisa izifo kwesibindi kanye uhlelo senhliziyo nemithambo yegazi, cystitis, nephritis, pyelonephritis. Manje uyazi ukuthi awusizo kule izithelo impilo yethu.
Ngezinye izikhathi emakethe ungathenga amakhabe futhi ngaphambi kokuphela Juni. Ngeshwa, akunjalo ngaso sonke isikhathi i ekuseni ezihlukahlukene amajikijolo etshalwa ezisekelwe kunembeza ikhabe abatshali. Amakhabe ukwenza ekuqaleni neestestvnnym indlela usebenzisa amakhemikhali ukuthi ngokuvamile ingozi empilweni yethu. Ngakho-ke, kubalulekile ukuba umnikazi izandla ukudala lesi sidlo ensimini.
hhayi sikhule ikhabe kunzima kakhulu, nje kudingeka ngempela ukukufunda ngokuningiliziwe ubuchwepheshe okhulayo bese ulandela imiyalelo ngokucophelela. Ngakho, ake ukucacisa umbuzo - indlela yokutshala ikhabe.
Into yokuqala udinga ukwazi ukuthi izimo ayadingeka ngenxa yalesi sizathu kubalulekile. Ukuze ikhabe liye landa ezinkulu, namanzi futhi simnandi kakhulu, kubalulekile ukuthi nokuvuthwa kwawo nokukhula esenzeka ukushisa, ilanga ezinhle futhi umswakama sincane ngokwanele. Ngakho-ke, uma ungaqiniseki ngalokho yakho izimo zezulu ziyavumelana nemithetho, kungcono ukukwenza ngendlela abamba ukushisa. Uma ukwazi e indlela yokutshala ikhabe isazi sezolimo abanolwazi, uyaqiniseka ukuthi ukweluleka phambi kwakho, ukutshala amakhabe, zalisa inhlabathi. Ekwindla inhlabathi kuyadingeka ukuze ungeze umquba rotted, konke kuhamba kahle eyamba phansi ukuze aphumule ngaphambi ukufika kwentwasahlobo. It is hhayi Kunconywa ukuba isitshalo amakhabe kanye amakhabe ezindaweni ezifanayo lapho ngakhulela eminyakeni eyedlule.
Growing amakhabe kanye amakhabe - inqubo ezithakazelisayo, umphumela wayo uyojabulela namanzi, amnandi futhi elimnandi inyama amajikijolo ezinkulu. Spring ukuthola imbewu abawuthandayo futhi uqhubekele inqubo kulinywe.
Siyaqhubeka baphendule lo mbuzo: indlela yokutshala ikhabe?
Okokuqala, thina banakekele izithombo. Lokhu kuzodinga amabhodwe nge ububanzi ngamasentimitha ayishumi nanhlanu. Ngaphambi kokuba atshale imbewu kudingeka cwilisa emanzini afudumele. Lapho naklyunutsya imbewu, kufanele itshalwe izimbiza at a 4-5 amasentimitha ukujula. Nakuba izithombo musa uvukile, ngokuba kubalulekile kulondolozwe izinga lokushisa ukhululekile emini ebusuku - 18-23 degrees Celsius. Izithombo akufanele phusha. Ekupheleni kuka-May - ekuqaleni kuka June, kungaba itshalwe abamba ukushisa.
Bambe inhlabathi, okwenza embhedeni, ukwakha umgodi phakathi, thina usigcwalisa umquba futhi wangcwatshwa komhlaba. Ezinhlangothini emgodini yokungcwaba isitshalo yethu izithombo. kufanele kube ngaphezu kwemitha elilodwa kwenye imitha square kwamagciwane. Lena yindlela inqubo amakhabe ezikhulayo iqala, kukhona okuhle kuphela zizinisele bese ulinda imbewu ikhule futhi isilungele ukusetshenziswa.
Manje uyazi izici inqubo yokukhula amajikijolo ezinkulu kakhulu futhi esihlwabusayo. Indlela yokutshala ikhabe, sabatshela ngokuningiliziwe nolimi kufinyeleleke, futhi manje-ke kukuwe. Qhubeka ukusebenzisa izinhlelo. Ngokuqinisekile, uzophumelela futhi ngeke kuphela bazithokozise engavamile, ukunambitheka namanzi yokuvuna, kodwa qiniseka Yokuphatha amakhabe wonke umndeni wakho nabangane.
Kungani eziqhakaza Decembrist? Indlela yokulungisa izinto?
Izihlahla Proper jasmine entwasahlobo
Phlox Orange Ukuphelela: betshala ukunakekelwa, incazelo kanye nokubuyekeza
Ukudla okusheshayo uchungechunge "Tower": imisebenzi kanye nokubuyekeza
"Black Tulip" (inoveli): umbhali, isifinyezo
Indlela ukulanda cindezela ekhaya
"Vatutinki" (sezempilo): izibuyekezo, izithombe